डा. भट्टराईलाई कटाक्षः डिग्रीको सर्टिफिकेटले देश बन्दैन-प्रधानमन्त्री «
डा. भट्टराईलाई कटाक्षः डिग्रीको सर्टिफिकेटले देश बन्दैन-प्रधानमन्त्री
प्रकाशित मिति :5July, 2019 7:25 pm
ओलीले डिग्रीको सर्टिफिकेटले मात्रै देश नबन्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईप्रति कटाक्ष गरे । “पीएचडी, पीएचडी भनेर प्रचार गरिन्छ । देशमा अरूले पनि पीएचडी गरेका छन् । डिग्रीले क्रान्ति गर्दैन । दृष्टिकोण र निष्ठाले क्रान्ति गर्छ,” उनको कटाक्ष थियो ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली आज पूर्वमन्त्री कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुलीलगायतलाई नेकपामा प्रवेश गराउने कार्यक्रममा बोल्दै थिए । डा. भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी गठन भएपछि धमला, पराजुलीलगायत नेताहरु एकताप्रति असन्तुष्ट थिए । उनीहरु नै नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
उनले डाक्टरेट उपाधिलाई भुँडी फुटेर मरेको भ्यागुतासँग दाँजे । “कुनै समय एउटा पोखरीमा भ्यागुतो थियो । उसले एकदिन बाच्छो देखेछ । आमालाई दौडँदै सुनाउन पुगेछ । आमाले भनिछे– कत्रो थियो बाच्छो ? उसले भुँडी फुलाउँदै देखाउन थालेछ । जति भुँडी फुलाउँदा पनि बाच्छोको आकारमा पुगेन, अन्तिममा भुँडी फुटेर मर्यो,” उनले उखान पस्किए ।
मूल विषयमा अल्मल्याउन अनेक सङ्कथन निर्माण हुनेतिर पनि उनले सचेत गराए । “भैँसीले कति दूध दिन्छ भनेर सोध्यो, हेर्नुहोस् न सिङ कति राम्रो छ भनेर सिङतिर देखाउँछन् । अहिले त्यसैगरी अल्मल्याउन खोजिएको छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
‘बाबुराममात्र होइन, उपेन्द्र पनि नेकपामा आए हुन्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रममा आफूभन्दा पहिले बोल्ने अध्यक्ष प्रचण्डले ‘मेरा त गुरुहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ’ भनेको प्रसंगमा टेकेर ‘डा. बाबुराम भट्टराईमात्रै होइन, उपेन्द्रहरू पनि नेकपा प्रवेश गरे हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरे ।
“यत्रो मेची–महाकाली दुईतिहाइभित्र अटाएका छन् । उहाँहरू नअटाउने कुरा हुँदैन, प्रचण्डले बाबुराम पनि आए हुन्छ भन्नुभयो । बाबुराम मात्र किन, फोरम पनि आए हुन्छ । उपेन्द्र पनि आए हुन्छ,” उनले भने ।
उनले एकता प्रक्रियालाई मुलुक निर्माणसँग दाँज्दै कसैलाई सानो छाती नगरी जिम्मेवारी दिइने बताए ।
उनले केहीले पार्टी फुट्ने सपना देखेको भन्दै नेकपा फुट्नका लागि नभई विकास र समृद्धिका लागि जुटेको दाबी गरे ।
“केहीले नेकपा फुट्छ भनेका छन् । म उनीहरूको सपनालाई कठै चाहना ! भन्न चाहन्छु । नेकपा फुट्दैन । मकहाँ छाप लगाउनुपर्ने हो ? लगाउन तयार छु,” उनले भने ।
पार्टी एकता प्रक्रिया नटुंगिनुमा नेतृत्वकै कमजोरी स्वीकार गर्दै असार मसान्तभित्र एकता टुंग्याइने उनले बताए । “एकीकरण नसकेर गम्भीर कमजोरी भएकै छ । तर, असारभित्र एकता सक्छौँ । सबैलाई उचित कार्यविभाजन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आश्वस्त तुल्याए ।
ओलीको प्रतिगामी कदमपछि नेकपालाई पुनर्गठनको ठाउँमा पुराएको छ : देवेन्द्र पौडेल
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ओलीको प्रतिगामी कदमपछि नेकपालाई पुनर्गठनको ठाउँमा पुराएको